किन खादैनन ब्राह्मणले प्याज, लसुन र च्याउ ? « Arthabazar.com
किन खादैनन ब्राह्मणले प्याज, लसुन र च्याउ ?
प्रकाशित मिति : ९ आश्विन २०७५, मंगलवार १८:१२
हाम्रो समाजमा अझै पनि शुद्ध ब्राह्मण प्याज, लसुन र च्याउ खाँदैनन् । यी कुनै कुराहरु मिसाइएको हुन्छ भनेर कतिपय ब्राह्म्णहरु घरबाहिर पनि खाना खाँदैनन् । तर, धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ किन उनीहरु लसुन, प्याज तथा च्याउ खाँदैनन् भनेर । आयुर्वेदका अनुसार खाद्य पदार्थ तीन खाले हुन्छन् ।
यसमा उत्साहा, क्रोध, अहंकार र विनाशका गुणहरु आउने गर्छन् । ब्राह्मणहरु लसुन र प्याज अहिंसाका कारण खाँदैनन् । प्याज, च्याउ र लसुन राजसिक र तामसिक रुपमा बाँडिएका छन् । यसको अर्थ उत्साह र अज्ञानतामा वृद्धि गर्छन् । किनभने यसका कारण जमीनमा रहेका धेरै जिवाणुको मृत्यु हुनेगर्छ । यसका कारण यसको सेवनमा गर्न ब्राहमण अस्विकार गर्छन् ।
केही मानिसहरु मान्छन् कि लसुन र प्याज खानाले व्यवहारमा समेत परिवर्तन आउने गर्छ । यसका कारण यिनीहरुको सेवन गर्दैनन् । सनातन धर्मका अनुसार प्याज र लसुन खानाले क्रोध बढाउने गर्छ र यसले अध्यात्मको मार्गमा समेत बाधा उत्पन्न गराउँछ । यसका कारण ब्राहम्णहरुलाई लाग्छ यिनीहरुको सेवन गर्नु हुँदैन ।